Korea Trip | GO & GO Travels
လည်ပတ်မည့်နေရာ ဂျေဂျူ - ဘူဆန် – ဆိုးလ်
( ပထမနေ့)းရန်ကုန် – ဟနွိုင်း – အင်ခွှန်း - ဆိုးလ်
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ညနေ ( ၁၉း၁ဝ ) နာရီ တွင် ဗီယက်နမ်အဲလိုင်းလေယာဉ်ဖြင့် စတင်ထွက်ခွါပါ မည်။ ည ( ၂၁း၃ဝ ) အချိန်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိပါမည်။
ည ( ၂၃း၂ဝ ) သန်းခေါင်ယံအချိန်တွင်၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဆိုးလ်မြို့ သို့ထွက်ခွါပါမည်။ လေယာဉ်ပေါ် တွင် ညအိပ်ပါမည်။ ( သို့ မဟုတ် ) ကိုရီးယားအဲလိုင်းလေယာဉ်ဖြင့် ထွက်ခွါပါမည်။
( ဒုတိယနေ့)းဆိုးလ်မြို့သို့ရောက်ရှိသည့်နေ့ ( နေ့ လည် /ညနေစာ )
ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဒေသစံတော်ချိန် ( ဝ၆း၃ဝ )တွင်၊ ဆိုးလ်မြို့ ရှိ အင်ချွန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ရောက်ရှိပါ မည်။ လေဆိပ်တွင်ထွက်ခွါခွင့်လုပ်ပြီးနောက်၊ လေဆိပ်ရှိဧည့်ကြိုခန်းမတွင်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပြီး၊ တဆက် တည်း၊ အင်ချွန်းလေဆိပ်မှ ဂျင်ပိုပြည်တွင်းလေဆိပ်သို့ ပြောင်းရွေ့ ပြီး၊ ပြည်တွင်းလေယဉ်ဖြင့် ဂျေဂျူးကျွန်းသို့ထွက်ခွါပါ မည်။ ဂျေဂျူးကျွန်းရှိလေဆိပ်သို့ ရောက်လျှင် တဆက်တည်ဲးနကြ င်္သူုသမန နှင့် သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်သို့သွားရောက် လေ့လာလည်ပတ်ပြီး၊ ထူးဆန်းစွာ မီးတောင်တွင်နဂါးဦးခေါင်းပုံစံဖြစ်ပေါ်နေသောကျောက် (့ သကညိါကော ) ကို သွား ရောက်လေ့လာကြပါမည်။ ကျောက်ဆေင့် ကမ်းခြေတလျှောက်တွင် အဖြူရောင် ဘန်ဂလိုများနှင့် လှပသော ကော်ဖီဆိုင် များကြောင့်လည်း ချစ်သူစုံတွဲများ အပန်းဖြေနေရာအဖြစ်ထင်ရှားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နေ့ လည်စာကို ( ၁၂းဝဝ )တွင် (ှန်ေသသှိအနော ဏသမအ ) ကို သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်တွင် ခေတ္တအနားယူပါမည်။ နေ့ လည် ( ၂း၃ဝ ) ခန့် လောက်တွင် ဂျဲဂျူးကျွန်း၏ထူးခြားလှသောမြေပေါ်မြေအောက်၊ ရေပေါ်ရေအောက်သဘာဝအလှများ နှင့် ဂျဲဂျူးကျွန်း တွင်ရှိခဲ့သော၊ ရှိနေဆဲဖြစ်သော သဘာဝတိရိစ္ဆာန်များ၊ ကျွန်းသူကျွန်းသားတို့၏ယဉ်ကျေးမှုတို့ ကို တနေရာ ထဲတွင် အံ့သြဖွယ်ကြည့်မြင်လေ့လာနိုင်သောသဘာဝသမိုင်းပြတိုက်သို့သွားရောက်လေ့လာပါမည်။ ပြီးနောက်ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်းစုံမှ သစ်ပင်ပန်းမာန်များဖြင့်၊ ကမ္ဘာအဆင့်မီ ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ကြီးဖြစ်သော ဟယ်လင်ပန်းခြံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါ မည်။ ပန်းခြံထဲတွင် ရှားပါးငှက်များ၊ အလွန်လှပသော သဘာဝလှိုဏ်ဂူ များ၊ သဘာဝကျောက်မျက်အလှများကို လေ့လာ ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ခရီးသွားများ စိတ်ဝင်စားမှု အများဆုံးးဖြစ် သော တစ္ဆေလမ်း ဟုထင်ရှားသည့် တောင်အဆင်း လမ်းလေးကို သွားရောက်လေ့လာပါမည်။ ထိုနေရာ အနိမ့် ပိုင်းတွင် ကားကိုစက်ရပ်ထားပါက သူ့ အလိုအလျှောက် အနောက်ပြန်ကာ ကုန်းပေါ်သို့ တက်သွားလေ့ရှိသဖြင့် ထူးခြားဆန်းကြယ် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလှပေသည်။ ညနေစာ ကို ဂျဲဂျူးကျွန်း၏ထင်ရှားသော ငါးကင်ဖြင့် သုံးဆောင်ပြီးနောက် တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်သို့ သွားရောက်ပြီး၊ ဟိုတယ် ဝင်ခွင့် ကို ဧည့်လမ်းညွှန်မှပြုလုပ်ပေးပါမည်။ ဟိုတယ် တွင်ညအိပ်ပါမည်။ံဥွှနူါ်ဲနဲံ့ဗျွှဗှုံသအနူဂဂဂ ( သမ )ှငာငူမေ
( တတိယနေ့)းဂျေဂျူကျွန်း ( နံနက် / နေ့လည် /ညနေစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ကိုရီးယားဒရမ်မာဇာတ်လမ်းတွဲများနှင့် နာမည်ကြီး ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကားများရိုက်ကူးရာဂျေဂျူကျွန်းစပ်ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင်ကျောက်တောင်၊ ကျောက်တုံးများဖြင့်သာယာလှပ သော ရှုခင်းများရှိရှာနသစငြုသငြ သို့ သွားရောက်လည်ပတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးနောက် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်မှစ၍ ယနေထိ့တိုင် ရှေးမူမပျက် တည်ရှိနေခဲ့သော ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် အဖြစ်ထင်ရှားသည့် (ှနသကညါနကစ င်္သူု ဠငူေါန ) တိုင်းရင်းသားကျေးရွာသို့ သွားရောက်လည်ပတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ နေ့ လည်စာကို ကိုရီးယားအစားအစာဖြစ်သော၊သီးစုံပင်လယ်စာကိုစားသုံးပါမည်။ပြီးနောက်အာရှ၏မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ ကျောင်းတော် များတွင်အကြီးဆုံးကျောင်းတော်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်းပေါ်မှ ပင်လယ်ပြင်အထိ့ရှုခင်းကိုကြည့်ရှုခံစားနိုင်သော ( ပေုခ့သညျွှေနာစူန ) ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ ညနေပိုင်းတွင်မီးတောင်ပေါက်ကွဲ၍ထွက်လာသော ချော်ရည်များပင်လယ်ပြင်အတွင်းသို့စီးဆင်းအေးခဲသွားရာမှ ချော်ကျောက်တမ်းကြီးဖြစ်ကာ ကျောက်တိုင်အလုံးပေါင်း များစွာကို စုပြီးထောင်ထားသည့်နှယ် ထူးဆန်းစွာဖြစ်ပေါ်နေသော (ဲကျညေါငမသူင ) သဘာဝကျောက်တန်းကြီးသို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ ပင်လယ်၏အလှနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်၏အလှတို့ မှာ လိုက်ဖက်လွန်းလှသဖြင့် ကမ္ဘာ့ သဘာဝ အမွေအနစ်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရသည့်နေရာဖြစ်ပါသည်။ ပြီးနောက် လေရဟတ်ကြီးများဖြင့် ဥရောပသဘာဝအလှ ကို ခံစားနိုင်ရန်ဖန်တီးထားသော (ူသအအူနျွှငညိြေူ ဠငူေါန ) တွင် ညနေဆည်းဆာ ၇ှုခင်းများကို စိတ်ကြည်နူး အေးချမ်းဖွယ် ခံစားရင်း အပန်းဖြေ အနားယူနိုင်ပါသည်။ ညနေစာကို သုံးဆောင်ပြီးနောက် တစ်နေတာ လည်ပတ်မှု ပြီးဆုံးပြီဖြစ်သဖြင့် ဟိုတယ်သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။
ံဥွှနူါ်ဲနဲံ့ဗျွှဗှုံသအနူဂဂဂ ( သမ )ှငာငူမေ
( စတုတ္ထနေ့)းဂျေဂျူကျွန်း - ဘူဆန် ( နံနက် / နေ့လည် /ညနေစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်မှ တခါတည်းထွက်ခွါခွင့်ကိုလုပ်ပါမည်။ ၄င်းနောက် နံနက်ပိုင်းလည်ပတ်မှုအဖြစ် ဂျေဂျူးကျွန်းနေ့ တဝက် ဈေးဝယ်လည်ပတ်မှု အနေအဖြစ် ပြအေနမငသကျ လမ်းမကိုကားဖြင့်သွားပါမည်။ ဗာနအ့ပျအ စက်ရုံ၊ှနသညညပနသ နှင့်ြောကါါကာ တို့ ကို လည်ပတ်ဈေးဝယ်ပြီးနောက် နေ့ လည်စာကို သုံးဆောင်ပါမည်။ ၄င်းနောက်ှနသညါနသကစ င်္သူု ကျေးရွာသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ ထိုကျေးရွာ သို့သွားရခြင်းမှာနသညျါညေူခ့ကဘသညါ ( တောင်ထိပ်ပေါ်တွင်နေထွက်ခြင်းဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည့် တိုးခရီး စဉ်အဖြစ်လည်ပတ်ခြင်း ) ကို လည်ပတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းတိုးခရီးစဉ်ကိုလည်ပတ်ပြီးနောက်၊ ဘူဆန်သို့ သွားရန် လေဆိပ်သို့ ဧည့်လမ်းညွှန်မှပို့ ဆောင်ပေးပါမည်။ ဘူဆန်သို့ ရောက်လျှင်ဲေါေူခ့င ငါးဈေး နှင့့် သညိါကျညေ ဏမေု ကိုပါ တဆက်တည်းလည်ပတ်ပါမည်။ ညနေစာကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ်သို့ဃ့နခု ငည ဝင်ပြီး၊ တနေ့ တာလည် ပတ်မှုပြီးဆုံး၍အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။
ံဥွှနူါ်ြှ့ဗြွှဥ့ဥုဥြှု ဂဂဂ ( သမ )ှငာငူမေ
( ပဉ္စမနေ့)းဘူဆန် –ွ့နဥြွဲ့ ( နံနက် / နေ့လည် /ညနေစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ နံရံများမပါသောပြတိုက်ဟုနာမည်ကျော်သွော့နဥြွဲ့ သို့ လည်ပတ်လေ့လာရန်ထွက်ခွါပါမည်။ွ့နဥြွဲ့ သို့ ရောက်လျှင် ၁၉၉၅ ခုနှစ် ယူနက်စကို မှတ်တမ်းထဲတွင် ကမ္ဘာ့ အဓိကရိုးရာအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းရေး စာရင်းထဲ တွင်တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သှောနသုါကူွောမသအအသယ ကြူါကျုေေ ဘုရားကျောင်း ကို လည်ပတ်လေ့လာပါမည်။ ၄င်းနောက်ွ့နဥြွဲ့ ပြတိုက်၊ ဃ့နသျာနသညိါနေ နှင့် နာမည်ကျော်ကြားထင်ရှားသော သြာကည ကန် ရီဆော့ ကို လည်ပတ်ပါမည်။ ညနေစာကို သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ်သို့ဃ့နခု ငည ဝင်ပြီး၊ တနေ့ တာလည် ပတ်မှုပြီးဆုံး၍အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။
ံဥွှနူါ်ွ့နဥြွဲ့ီ့ဗနြ့နဥျြွနှဥျွှ (ဥမ )ှငာငူမေ)
( ဆဋ္ဌမနေ့)ွး့နဥြွဲ့ -ဗညိသညါ –ီညေပညေါ – အြ.ှနသမေု ( နံနက် / နေ့လည် /ညနေစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုကာ ချိုဆန်ဘုရင် မင်းဆက် က ပိသုကာလပ်ရာအိမ်များ နှင့် ကျေးရွာ အဆောက်အအုံ များကိုပြသထားသော ဗညိသညါံသေ့န ဠငူေါန ကိုထွက်ခွါပါမည်။ ၄င်းရွာတွင်ရှိသေီာညေပညေီါသိှောောဘသညါ ကိုလည်ပတ်ပါမည်။ှနသမေု အမျိုးသား ဥယျဉ် ထဲတွင်ရှိသော နာမည်ကျော်ရဲတိုက် နှင့်ွတသညါနျာနသညါ ရဲတိုက် တို့ တွင်အမှတ်တယဓါတ်ပုံရိုက်နိုငအထက်ပါသည်။ ၄င်းနောက် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၈၆ဝ မီတာအမြင့်တွင်တည်ရှိနေသှောနသမေု တောင် ၏ ပန်းချီကားချပ် အလား၊ ရှုမောဖွယ် အလှအပများကွိုတသညါနျာနသညါ ရဲတိုက်မှနေ၍ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ညနေစာကို သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ်သို့ဃ့နခု ငည ဝင်ပြီး၊ တနေ့ တာလည် ပတ်မှုပြီးဆုံး၍အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။ံဥွှနူါ်ှဥျွဗီုဗနြ့နဥျြွနှဥျွှ ဂဂဂ (ဥမ )ှငာငူမေ
( သတ္တမနေ့)းအြ.ှနသမေု –ွသျနသညါ –ှနသကူ ( နံနက် / နေ့လည် /ညနေစာ )
နံနက်စာကိုဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ွသျနသညါ နက္ခက်တာရာပြခန်းကိုသွားရောက် လေ့လာ ပါမည်။ နေ့ လည်စာကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏မြို့ တော် ဆိုးလ်သို့ ထွက်ခွါပါမည်။ ဆိုးလ်သို့ရောက်လျှင်ရောက်ခြင်း ဧည့်လမ်းညွှန်မှ နာမည်ကျော် ဃဥနဌြေူ သို့ဈေးဝယ်ရန်ပို့ ဆောင်ပေးပါမည်။ ညနေစာကို သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ်သို့ဃ့နခု ငည ဝင်ပြီး၊ တနေ့ တာလည် ပတ်မှုပြီးဆုံး၍အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။
ံဥွှနူါ်ြ-ြှုဇံဥွှနူ ဂဂဂ (ဥမ )ှငာငူမေ
( အဋ္ဌမနေ့)းဆိုးလ်မြို့ ( နံနက် / နေ့လည် /ညနေစာ )
နံနက်စာကိုဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ မြို့ တော် တနေကုန်လည်ပတ်မှု ( င်္ကူီူပွှေသကမ ) ကိုစတင်ပါမည်။ လည်ပတ်မည့်နေရာများမှာ – သမ္မတအိမ်တော် (ြူကနံသကျန )၊ွပနသညါဘသုါကညါ နန်းတော်၊ ကိုရီးယား အမျိုးသား င်္သူု ပြတိုက်၊ှုညျေိသညှါအ.ယီကအပ င်္မနနှ့သစ နှင့် အလှကုန်ဆိုင် ၊ြျောေါသူ င်္သူု ဠငူေါန ၊ ပြနသညိသညှါအ.ူသအအနျွှသမွှိူ့နာန ဏမေု များကို လည်ပတ်ကြပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက် အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။
( နဝမနေ့)းဆိုးလ်မြို့ - ဟနွိုင်း - ရန်ကုန် ( နံနက် / နေ့လည် )
နံနက်စာကိုဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ကိုရီးယားမှ မပြန်ခင် ကင်ချီပြုလုပ်ပအဆင့်ဆင့် ကို လှပသော ကိုရီးယားရိုးရာအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ပြီးပြုလုပ်နေပုံတို့ ကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ လေ့လာနိုင်ရန် အခွင့် အရေး တခု အနေအဖြစ် ကင်ချီ ကျောင်း ကို လိုက်လံပြသပေးပါမည်။ ၄င်းနောက် ဆိုးလ်မြို့ ၏အကြီးဆုံး ရှော့ပင်းမောလ်အသစ်ဖြစ်သောန– ဃ့နခုသမနေ ကို ပို့ ဆောင်ပေးပါမည်။ နေ့ လည်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လေဆိပ်သို့ ပို့ ဆောင်နှုတ်ဆက်ပါမည်။
------------ ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပါမည်။ -----------
Above The Program’s Tour Cost
Min 06 - 09 paxs ( group ) = 2400 US$ ( per pax )
Min 10 - 15 paxs ( group ) = 2200 US$ ( per pax )
Min 16 – 25 paxs ( group ) = 1980 US$ ( per pax )
- ဗီဇာကြေး နှင့် ထွက်ခွါခွင့်ပုံစံကြေးများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ်လက်မှတ် နှင့်လေဆိပ်အခွန်
- လည်ပတ်မှု နှင့် လေဆိပ် ကြို / ပို့ များအတွက် အဲယားကွန်းကား
- ခရီးစဉ်တွင်ပါဝင်သောလည်ပတ်မှုများအတွက် ဝင်ကြေးများ
- ခရီးစဉ်တွင်ပါဝင်သည်ဟုဖေါ်ပြထားသော နံနက်/နေ့လည်/ညစာများ နှင့်ရေသန့်ဗူးများ
- အင်္ဂလိပ်စကားပြော ဧည့်လမ်းညွှန် နှင့် မြန်မာတိုးလီဒါ၊ ပြည်တွင်းလေယာဉ်လက်မှတ်
- အဝတ်လျှော်ခများ၊ အချိုရည်၊ အရက် သရေစာ စားသုံးမှုများ နှင့် ကိုယ်ပိုင်အသုံးစရိတ်များ
- အချိန်ပိုကြေးများနှင့် ခရိးစဉ်တွင်ပါဝင်သည်ဟုဖေါ်ပြမထားသော လည်ပတ်မှုနှင့် ဝင်ကြေးများ
- ဧည့်လမ်းညွှန် နှင့် ယဉ်မောင်းအတွက် အပိုကြေးများ